पाँच दिन भनेर बोलाइएको बैठक आठ दिन लम्बियो, नेताले खाना खुवाएपछि अनुमानभन्दा २० लाख मात्रै बढी खर्च
२०७५ पौष २९ आइतबार ०६:१५:००
सात शीर्ष नेताहरूले निजी खर्चमा हरेक दिन पालैपालो रात्रिभोज गरेका थिए । कांग्रेसले महासमिति सुरु हुनुअघि नै सदस्यहरूलाई बिहानको खाना मात्रै खुवाउने सूचना गरेको थियो । बेलुकाको खानाको व्यवस्था आफैँ गर्नुपर्ने भनिएको थियो । तर, नेताहरूले व्यवस्था गरेपछि सदस्यहरूलाई सजिलो भयो । केही नेताहरूले पार्टीमा प्रभाव र शक्ति देखाउन नेताहरूले व्यक्तिगत खर्चमा खाना खुवाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए, बहिस्कारसमेत गरे । झन्डै एक हजार ६ सय सहभागी बैठक २८ मंसिरमा सुरु भई ६ पुसमा सकिएको थियो । २९ मंसिरदेखि ४ पुससम्म पार्टी प्यालेसमा र ५ पुसदेखि ८ पुससम्म पार्टी कार्यालय सानेपामा बैठक चलेको थियो ।
यी हुन् रात्रिभोज दिने सात नेता
सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमिति बैठक उद्घाटन भएको दिन २९ मंसिरमा रात्रिभोज दिएका थिए । देउवापछि व्यक्तिगत खर्चमा नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेता गोपालमान श्रेष्ठले पालैपालो सदस्यहरूलाई भोज दिए ।
खानामा मात्रै पार्टीको ७० लाख खर्च, प्लेटको साढे ५ सय
महासमिति बैठकमा पार्टीले खुवाएको बिहानको एकछाक खानामा मात्रै ७० लाखभन्दा बढी खर्च भएको कार्यालय सचिव प्रेम केसीले बताए । प्रतिप्लेट ५ सय ५० रुपैयाँको खाना खुवाइएको थियो । उनका अनुसार पार्टी कोषबाट सबैभन्दा धेरै खर्च भएको पनि खानामै हो । मञ्च सजावट, पार्टी प्यालेसको भाडा, बैठकमा दुईवटा डिजिटल डिस्प्लेका लागि दिनको ८० हजार लागेको थियो । मोटामोटी खर्च निस्कए पनि शीर्षकअनुसार पूरै विवरण तयार भइनसकेको केसीले बताए ।
सदस्यबाट उठेको थियो १४ लाख
महासमितिमा भाग लिन आएका सदस्यसँग एक हजारका दरले शुल्क लिएको थियो । १६ सय सहभागीबाट करिब १४ लाख उठेको थियो । यही पैसाबाट नगद कारोबार गरेको कांग्रेसले अरू खर्च पार्टी कोषबाट गरेको केसीले बताए । ‘हामीले सुरुमा पाँच दिनका लागि १ करोड रुपैयाँ खर्च हुने आँकलन गरेका थियौं’ केसीले भने, ‘तर, बैठक ८ दिनसम्म चले पनि २० लाख मात्रै बढी खर्च भएको प्रारम्भिक हिसाब निकालेका छौं । यसमा दुई चार लाख मात्रै तलमाथि हुन सक्छ तर, यो भन्दा बढी खर्च भएको छैन ।’ महासमिति बैठकमा सहभागी झण्डै एक हजार ६ सय जनलाई पार्टीका ८ शीर्ष नेताले रात्रीभोज दिएपछि पनि खर्च कम भएको जानकारी उनले दिए ।
यी हुन् ८ दिनसम्म चलेको महसमितिमा रात्रीभोज दिने नेताहरू
सभापति शेरबहादुर देउवाले २९ मंसिरमा उद्घाटन कार्यक्रम सकिएको रात रात्रीभोज दिएका थिए । देउवा जस्तै गरी आफ्नै व्यक्तिगत पैसामा नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेता गोपालमान श्रेष्ठ गरी ७ नेताले रात्रीभोज दिएका हुन् । तर केही नेताहरूले पार्टीमा प्रभाव र शक्ति देखाउन नेताहरूले व्यक्तिगत रुपमा खाना ख्वाएको विषयलाई रुचाएनन् । केही नेताहरूले व्यक्तिगत रुपमा ख्वाइएको खानाभन्दै बहिष्कार पनि गरेका थिए ।
कांग्रेसले महासमिति अगावै सदस्यरुलाई बिहानको खानामात्रै ख्वाउने भन्दै बस्ने प्रबन्ध आफैं गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तोमा महासमितिको दौरान ८ दिन बिहान पार्टीले र बेलुका नेताहरूले व्यक्तिगत खर्चमा रात्रीभोज दिएपछि कांग्रेसको खर्च अनुमान गरेकोभन्दा निक्कै कम भएको सचिव केसीले बताए । कांग्रेसले प्रतिप्लेट ५ सय ५० मा खाना ख्वाएको थियो । महासमिति सदस्यहरूले राती बास बस्ने व्यवस्था पनि आफैं गर्नुपर्ने थियो । बैठक लम्बिंदा पनि सदस्यहरू निक्कै पातलिएक थिए । सदस्य घटेपछि खानाको अर्डर पनि कम गरिएको थियो ।
१६ सयबाट १३ देखि १४ लाख
कांग्रेसले महासमितिमा भाग लिन आउँने सदस्यसँग एक हजारका दरले शुल्क लिएको थियो यसरी १६ सय सहभागी भनिएको बैठकमा १४ लाख हाराहारी पैसा उठेको थियो । यही पैसाबाट नगद कारोवार गरेको कांग्रेसले अरु खर्च पार्टी कोषबाट गर्दै गरेको जानकारी केसीले दिए ।
के–केमा भयो मुख्य खर्च
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले निकालेको प्रारम्भिक खर्च एक करोड २० लाखमा खानामा सबैभन्दा धेरै खर्च भएको छ । खानामा ७० लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । त्यसपछि विधानका मस्यौदा, राजनीतिक प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्ताव, समग्र आर्थिक नीति, कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदन छपाइमा बढी खर्च लागेको छ । त्यस्तै, मञ्च सजावट, पार्टी प्यालेसको भाडा, बैठकमा दुईवटा डिजिटल डिस्प्लेका लागि दिनको ८० हजार रुपैयाँ लागेको केसीले बताए । तर, मोटामोटी खर्च निकाले पनि कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो भन्ने पूरै विवरण भने तयार हुन बाँकी रहेको जानकारी केसीले दिए । २९ मंसिरदेखि ४ पुससम्म सिंहदबारअगाडि यलम्बर पार्टी प्यालेसमा उद्घाटन र बन्दसत्रको कार्यक्रम भएको थियो । त्यसपछि ५ देखि ८ पुसमा समापनसम्मको कार्यक्रम केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा ग¥यो ।